Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Lufthansa maliteghachiri ụgwọ ụgbọ elu North America na Asia site na ọdụ ụgbọ elu Munich
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • investments • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ka ụlọ ọrụ njem ụwa na-alaghachi na ọkwa ọrụ mbụ, Lufthansa na-ewusi ọrụ ya kachasị elu site na ọdụ ụgbọ elu Munich ma ga-enyekwa klas mbụ na ụzọ ndị ahọpụtara.
Lufthansa na-emegharị Airbus A340-600 ise na-enye klaasị mbụ.
Lufthansa Airbus A350-900s iji nye klas mbụ dị ka oge ọkọchị 2023.
Na-amalite na ọkọchị 2022, A340-600 ga-efe site na Munich bụ isi na North America na Asia.
Ọdụ ụgbọ elu Munich bụ naanị 5-kpakpando nke Europe ruo ọtụtụ afọ ma bụrụ onye ama ama n'etiti ndị njem Lufthansa, n'ụwa niile, ọ bụghị naanị dị ka ọnụ ụzọ ámá Bavaria, kama dị ka onye na-eduga, ọdụ ụgbọ elu na-enye njem njem na-akpali akpali.
Ugbu a ka ụlọ ọrụ njem ụwa na-alaghachi na ọkwa ọrụ, Lufthansa na-ewusi ọrụ ya kacha elu site na Ọdụ ụgbọ elu Munich ma ga-enyeghachi klas mbụ na ụzọ ndị ahọpụtara. Nke a pụtara, Lufthansa na-emegharị ụgbọ elu Airbus dị ogologo oge A340-600 dị nwa oge na klaasị ụgbọ elu anọ, gụnyere onyinye mmeri mbụ nke klas mbụ na oche asatọ.
Malite na oge ọkọchị 2022, A340-600 ga-efe site na Munich bụ isi gaa na North America na Asia. Mkpebi imegharị ụgbọ elu ndị a bụ n'ihi ịrị elu na-arịwanye elu, maka azụmahịa yana njem ezumike.
Na ngwụsị oge ọkọchị 2023, nke mbụ Airbus A350-900, na-enye klaasị mbụ, ga-esonye n'ụgbọ mmiri ahụ ma si na Munich pụọ, na-akwalite onyinye dị elu na ogige 5-star nke Lufthansa.
Tupu ọrịa a amalite, ụgbọ mmiri Lufthansa Airbus A340-600 nwere ụgbọ elu iri na asaa, iri na abụọ n'ime ha ka na-ere. Aircraftgbọ elu ise ọzọ anaghị ere ugbu a ma ọ ga-arụ ọrụ nwa oge ma ree ya n'oge ọzọ.
Lufthansa na-aga n'ihu itinye ego na nhazi nke ụgbọ mmiri ya. N’ọnwa Mee gara aga, otu a zụtara ụgbọ elu 10 ọzọ nke ọgbara ọhụụ: ise Boeing 787-900 na A350-900 ise. Ndị mbụ ga-arụ ọrụ n’oge oyi a. N'ime afọ a naanị, Lufthansa na-ewepụta kwa ọnwa nke ụgbọ elu Airbus ọhụrụ, nke na-enweghị mmanụ site na ezinụlọ A320neo. Nyefe ụgbọ elu 107na ụgbọ elu Airbus A320neo ụgbọ elu ezubere ruo 2027.